Egwuregwu Harry Potter kacha mma na gam akporo | Gam akporosis
Ọ bụ eleghị anya, otu n'ime sagas nwere ihe ịga nke ọma na akụkọ ihe mere eme nke sinima, n'ihu ndị ọzọ a maara dịka Star Wars, Jurassic Park ma ọ bụ James Bond. Harry Potter ka oge na-aga marala otu esi edo onwe ya nsọ, ekele niile na akụkọ dị n'azụ akwụkwọ ya ọ bụla ma mechaa gbanwee na fim.
Na mpaghara nke ọ na-emechu ihu bụ egwuregwu vidio, ebe o mekwara niche dịkwa na ngwaọrụ mkpanaaka. Anyị na-egosi gị kacha mma Harry Potter egwuregwu na gam akporo, na ọtụtụ dịgasị iche iche na ụfọdụ n'ime ha nwere ihe ọzọ dị mkpa nke ịchọrọ igwu egwu ha.
2 Ajụjụ maka Harry Potter Spells
3 LEGO Harry Potter: Afọ 1-4
4 LEGO Harry Potter: Afọ 5-7
5 Harry ọkpụite: Ihe omimi Hogwarts
6 Nyocha ajụjụ ọkachamara Harry Potter: U8Q
7 Harry Potter: Ihe mgbagwoju anya na Ime Anwansi
8 Harry Wizard Potter Ime Anwansi Na-ada ụda
9 Ihe Mgbakwunye HP Hogwarts
10 Ime anwansi Egwuregwu Egwuregwu Ọkụ
Onye Mmepụta Niantic na-ebupụta aha dị iche na aha Harry Potter saga na aha Harry Potter: Wizards Unite. Dabere na aha Pokémon Go, ụwa na-ekpughere ndị na-arụ ọrụ ọgwụ na-eri ahụ, nke ị ga-eji eziokwu dịwanye elu iji gaa n'ihu.
In Harry Potter: Wizards Jikọtara na ị ga-ahapụ ihe ndị e kere eke site na hexes, maka nke a, ị ga-eji anwansi anwansi nke agwa ahụ. Otu ihe di egwu bu ichikota ihe, ha niile ga-adị mkpa inwe ọganihu na egwuregwu na-atọ ụtọ maka ụdị ọha mmadụ niile.
Aha nwere ihe omume pụrụ iche, nke gị na ndị enyi gị nwere ike igwu egwu dịka otu, yana nke ruru ihe ruru egwuregwu anọ. Ọ bụghị nke kachasị kpọrọ, n'agbanyeghị nke a ọ bara uru ịnwale ya ma kpọọ otu aha dị iche na saga saga ndị ọzọ na gam akporo.
Ajụjụ maka Harry Potter Spells
N'agbanyeghị na ọ bụghị egwuregwu vidio dịtụ, In Quiz for Harry Potter Spells ị ga - egosiputa ihe niile ị maara banyere usoro ama ama nke akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ egwuregwu a na-aza ajụjụ na aziza, nke anyị ga-amata ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgafe agba dị iche iche.
O sitere na nkebi ahịrịokwu na okwu sitere na saga a maara nke ọma, Ọ nwere ọtụtụ ọkwa na sistemụ ajụjụ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-enweghị ike ịhapụ ndepụta ahụ. Azịza ha nwere ike ịdị iche, ma ọ bụ jiri azịza anọ nwere ike ma ọ bụ tinye mkpụrụedemede efu.
Ihe anwansi ahụ pụtara, kamakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na usoro a ma ama, yabụ ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, ọ kachasị mma ịhụ onye ọ bụla n'ime ha tupu. Ọ bụghị ngwa gọọmentị, mana ọ na-abụ nhọrọ na-adọrọ mmasị ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị kporie ndụ.
Developer: World nke ajụjụ
LEGO Harry Potter: Afọ 1-4
Aha a sitere na akwụkwọ Harry Potter na fim 1 ruo 4, nke ọ ga - arụ ọrụ ndị edemede dịka Harry, Ron, Hermione, na ndị ọzọ. Will ga-enyocha Hogwarts n'ihe karịrị ogo 40 dị iche iche, ha niile nwere eserese dị elu wee zuo oke ịrụ ọrụ na ekwentị anaghị adị ike.
Egwuregwu a dabere na utu aha LEGO ndị ọzọ, na-atọ ụtọ iji ọtụtụ awa glued na obere enyo, ọ bụ ezie na ọ dịkwa egwu na ngwaọrụ dịka mbadamba ma ọ bụ kọmputa na emulators. Ihe kachasị mma bụ ịnwe ike inyocha map ọ bụla iji chọpụta ihe omimi ya na-aga n'ihu na ha.
Gụnyere Triwizard ndorondoro, Quidditch World Cup, agha megide basilisk n'ime ụlọ nzuzo, nzute Aragog na ihu na ihu na Voldemort. Njikwa na ihuenyo mmetụ dị mfe na nghọta, jiri mkpịsị aka ekpe ị nwere ọrụ ahụ, ya na ndị dị n'aka nri bụ ndị na-emekọ ihe na agwa na ndị iro. N'agbanyeghị ọkwa ya, LEGO Harry Potter: Afọ 1 ruo 4 bara uru ịnwale na ngwaọrụ gam akporo.
A ga-aha aha a n'afọ ikpeazụ nke Harry Potter n'ụlọ akwụkwọ Hogwarts, nke nwere nsogbu ka ukwuu dị ka e mere maka ụmụaka site na 5 ruo 7 afọ. Ahụmịhe egwuregwu ga-adị mma karịa na nnyefe site na 1 ruo 4, na-enwe akụkụ eserese ka ukwuu na akụkọ ka mma.
Njikwa na LEGO Harry Potter: Afọ 5-7 dị mfe ime site na ihuenyo mmetụ, ma ọ na-achọ ịchụso, ịkọ ọgwụ, ma ọ bụ ịgbanwe mkpụrụedemede. Tinyegharịa duels iconic site na ịtụfu na dodging Nkọwa mkpịsị aka, otu n'ime ọtụtụ ihe dị.
LEGO Harry Potter: Afọ 5-7 Tinye Ibe edokwubara, mezue 100% nke egwuregwu na obere oge na akara ga-apụta na online leaderboard. Mmezu nke onye ọkpụkpọ egwuregwu vidiyo a ma ama bụ ngụkọta nke 25, onye ọ bụla n'ime ha ga-esi na mfe gaa na nsogbu.
Egwuregwu vidio ga-etinyere na Hogwarts, arụzi ọrụ dị ọcha ọrụ na ọ bụ kpomkwem bụ otu n'ime aha ndị na-ejide ọtụtụ ndị nwara ya. Onye anyị jidere ga-amụta aghụghọ anwansi na ike, ha niile dabere na ọganihu, ọ ga-adịkwa mkpa ịnweta kaadị larịị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n'ihu ngwa ngwa.
Akụkọ a nwere aghụghọ na nnukwu ihe nkiri, iji anya nke egwuregwu a bụ otu n'ime igwe dị ike, ịbụ otu n'ime ndị na-aga n'ihu na-echekwa ụdị ahụ. Usoro nke igwu egwu nwere ike ịbụ ihe na-agwụ ike site n'ịhọrọ ịhọrọ mmewere ọ bụla na ihuenyo ahụ.
Harry Potter: Hogwarts Mystery na-eri nri na micropayments, ihe niile a bụ aha efu nke saga ma mepụta ya Onye Mmepụta Jam City. Ogo nke Hogwarts Mystery bụ megabytes 165, ọ chọrọ gam akporo 5.0 ma ọ bụ ụdị dị elu karịa ya ma karịa 50 nde nbudata.
Ọ bụ egwuregwu dị elu karịa karịa Quiz maka Harry Potter Spells, ọ dabere na nkebi ahịrịokwu na ngosipụta nke ihe nkiri dị iche iche. Ihe ọma gbasara Harry Potter Wizard Quiz: UBQ nwere ike ịza ajụjụ na enweghị usoro, ọ bụ ezie na ị nwekwara ike ịhọrọ ndị nke ihe nkiri a na-ekwu maka ya.
Dị ka egwuregwu ọ bụla, azịza ndị ahụ ga-enwe oke oge Malite ụtụ isi, enwere ike ịbawanye ma ọ bụrụ na ịchọrọ na nhọrọ egwuregwu. Scoring dị mkpa iji rụchaa dị ka onye mmeri, yabụ na ị gaghị echefu ọtụtụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iti ndị na-emegide gị.
Azịza ndị na-kwupụtara, onye ọ bụla n’ime ha ga-eziga gị na peeji nke njikọ ịmụtakwu ihe banyere ha, ịbụ nnọọ uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado nke usoro. Ọ dị mma ka gị na ezinụlọ gị nwee obi ụtọ ya na ndị enyi ma ọ bụrụ na ị masịrị Harry Potter na ụwa ya niile.
Harry Potter: Ihe mgbagwoju anya na Ime Anwansi
Egwuregwu egwuregwu anwansi na anwansi emetụbeghị nke ọma karịa na ngwa a. Harry Potter: Ihe mgbagwoju anya na Ime anwansi bụ nke Zynga a maara nke ọma mepụtara ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, gụnyere 3-in-a-row tinyere ụfọdụ iberibe gụnyere na egwuregwu sitere na usoro akwụkwọ akụkọ a ma ama.
Ọganihu ọ bụla ị na-eme ga-emeghe oge dị mkpa site na fim, Harry, Ron na Hermione na ọgụ ahụ, njakịrị nke Fred na George ma ọ bụ Hagrid na-elekọta ndị anwansi. Mụtakwuo banyere Hogwarts, yana ịnakọta ihe ndị e kere eke ga-enyere gị aka idozi esemokwu ahụ Na ụzọ dị mfe. Ngwa a dị ihe megabytes 132, ebudatara ihe karịrị nde mmadụ 10 na akara ngosi bụ 4,7 kpakpando.
Harry Wizard Potter Ime Anwansi Na-ada ụda
Ọ bụ egwuregwu 3D ị na-emeghe ihe odide na akụkụ atọ ma na-awụlikwa elu na taịl. Iji mee nke a, ị ga-ahọrọ otu pianos dịnụ ma mee egwu, enwere ọtụtụ ụdị ị ga - emegharị, ma ọ masịrị gị ma ọ bụ mee usoro izizi gị.
Ndi okachamara na egwu meputara ndetu a, maka nke a, i ghaghi ibanye na nke obula ichota egwu a. Harry Wizard Potter Magic Beat Hop Tiles ngwa ji ihe megabytes 54 ma budata ihe karịrị mmadụ 100.000.
Ihe Mgbakwunye HP Hogwarts
N'ịbụ nke dị na ụwa nke Harry Potter, ihe omimi a na-ewu ewu na Hogwarts, ya mere, oge eruola itinye ya otu otu ruo mgbe ọ gwụchara. Ihe na-atọ ụtọ bụ inwe ike ịme ọtụtụ dị iche iche oge ọ bụla, a na-emelite ya oge niile, isi ihe ị ga-atụle.
O nwere otutu ihe mgbagwoju anya, gbakwunye udiri nsogbu abuo, otu maka umuaka na nke okenye ndi okenye sitere na 16. Ga-enwe ike ịtụgharị, gbanwee ma mezue iberibe ahụ, na nke ọ bụla ha ga-enye gị ihe nrite iji gbapụta egwuregwu mgbagwoju anya kwa izu.
Ime anwansi Egwuregwu Egwuregwu Ọkụ
Ihe egwuregwu dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụwa nke Harry Potter. Iji mee nke a, ị ga-edozi ihe mgbagwoju anya nke ga-apụta n'oge ọhụụ dị iche iche, nke ga-adị mgbagwoju anya megide ọganihu ndị ọzọ, ọ ga-adabere na ma ị jikwaa rụchaa ya.
Ihe dị mma banyere mgbagwoju anya bụ na nke ọ bụla nwere mgbagwoju anya ya, taịl nile na-aga naanị otu ebe ma ọ bụrụ na ọ dị njọ, ọ ga-adọ gị aka na ntị na ọ gaghị ebe ahụ. Ime anwansị Jigsaw Puzzle Game na-enweta ọkwa 4,6 nke 5. Ọ na-ebudatara ihe karịrị otu puku mmadụ taa.
Developer: egwuregwu eze
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu Harry Potter kachasị mma na gam akporo